Juunyo | 2007 | WEEJIDOW
Archive for Juunyo, 2007
Muqdisho iyo Baydhabo oo laga xusey 1 Luulyo
Juunyo 30, 2007
Muqdisho iyo Baydhabo ayaa si wanaagsan caawa looga xusey 1 luulyo.
Muqdisho ayaa xaflada ka qeyb galay Madaxweyne C/laahi Yuusuf shacabkana u hambalyeeyey.
Baydhabo ayaa si wanaagsan loo dhigey xaflada 1 luulyo iyadoo halkaasi ay ka hadleen Wasiirka Maaliyada Dr. Xasan maxamed Nuur “Shaatigaduud” , Gudoomiyaha Gobolka Bay Barbaar Amar, Xlidhibaano fara badan iyo odeyaal oo u hambalyeeyey shacabka Soomaaliyeed. Xafladaas ayaa waxaa riwaayad wanaagsan ku soo bandhigey kooxda fanaaniinta “ISHA” . Waxaa kaloo ka soo qeyb galay dadweyne aad u fara badan iyadoo caawa laga qaadey bandowgii saarnaa Baydhaba.
War deg deg ah Qarax xoogan oo ka dhacay isgooyska Howlwadaag iyo xabada ka socota xaafada Geed Jaceel xili madaxtooyada ka socota xaflada 1Luuliyo
Qarax xoogan ayaa ka dhacay isgooyska Howlwadaag iyadoona Rasaasna ay ka socota xaafada Geed Jeceel xili xarunta Madaxtooyada ay ka socota xaflada 1Luuliyo .
Rasaasta ka socota Geed Jeceel ayaa dhexmareysa kooxo diidan ciidamada Shisheyey iyo Ciidamo ka tirsan DFKMG iyadoona la garaneynin xiligaan wax soo kala gaaray labada qole ee dirirta u dhaxeysa ,warka qarax iyo Rasaasta socota ayaa noo xaqiijiyey dad ka agdhow goobta ay wax ka dhacayaan iyadoona la sheegaya in la xiray mar hore goob ta uu qaraxa xoogan ka dhacay halkaasna oo aag ay ka galeen ciidamo ka tirsan DFKMG.
Qaraxa yo Rasaata ka socota labada degmo oo kaabiga ku haayo xarunta madaxtooyada ayaa ku soo beegmay xili halkaasi ay ka socota xafalad lagu maamuusayo maalinta 1Luuliya iyadoona wali la maqlayo rasaasta ka dhaceysa hubka fud fud
Degmooyinka Howlwadaag , Wardhiigley .Hurwaa,Gubta iyo Yaaqshiid ayaa waxaa ka jiray maalmahaan dil qorsheysan iyo qaraxyo lala beegsanyo kooxaha taageersan DFKMG .
Sarkaal ka tirsan ciidamada Ilaalada Deegaanka xamar oo daqiiqado ka hor lagu dilay magaalada Muqdisho
Waxaa daqiiqado ka hor saakay lagu dilay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada deegaanka Xamar [Monashiibiyo].
Sarkaalkaan ayaa lagu magacaabi jiray G/Dhaexe Maxamed Muuse Cadow [Ceel Baraf] oo isagu ahaa taliyaha degmooyinka qeybta bari, ayaa waxaa toogasho ku dilay dabley ku hubeysneyd bastoolado, waxaana la dilay isagoo u soo socday shaqadiisa maalmeed.
Daleyda dishay sarkaalkaas ayaa baxasaday markii ay dileen sarkaalkaas, waxaana meydka sarkaalkaan la geeyay gurigiisa, ma aha markii ugu horeysay ee Muqdisho lagu dilo sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda.
Dhinaca kale waa sarkaalkii ugu horeeyay ee ciidamada dowladda hoose ee Muqdisho lagu dilo, waxaana horay ugaarsi ugu socday gudoomiyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir iyo ku xigeenadooda.
Qaraxyo is daba joog ah oo xalay gobo kala duwan oo Magaalada Muqdisho ah laga maqlaayay
Waxaa xalay Magaalada Muqdisho laga Maqlaayay Qaraxyo xoogan, iyadoo mid ka mid ah lagu weeraray saldhigga Galbeed ee degmada Madiina, iyadoo sidoo qaraxyo is xiga ay ka dhaceen isla xalay isgoyska H/wadaag, waxaana qaraxyadaas loo adeegsaday Bambooyin lagu tuuray goobahaas.
Saldhiga Galbeed ee xalay la weeray ayaa la sheegin wax dhaawac ah oo soo gaaray ciidamada Booliska ee halkaas ku sugan, waxeyna xalay qaraxyadaan ku soo aadeen xili uu magaalada bandow saran yahay.
Qraxyo kale ayaa lagu soo waramayaa inay qeybo kale oo Muqdisho ah, iyadoo agagaarka cusbitaalka Carafaat ay ka dhaceen qarxyo xooggan, mana jiraan cid ay u qabteen ciidamada Booliska dowladda fedraalka.
Dhinaca kale qaraxyada ka dhaca Magaalada Muqdisho ayaa isa soo taraya maalmahaan, iyadoo ay soo dhowdaha xiligii lagu balansanaa in la qabto shirweynaha Dib u heshiisiinta oo ay ka harsan tahay oo kaliya muddo 15-cisho ah.
Madaxweyne C/laahi yuusuf oo sheegey in ay dowlada tageynin xitaa haddii uu waqtigeeda dhamaado
Haddii Dadka qaarkiis is-leeyahay Dowladda Federaalka Shanta Sano ka dhameeya, taasi ma dhaceyso, annaguna meesha ka tegi meyno iyadoo aan xal loo helin Soomaaliya”Sidaasi waxaa yiri madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya C/llaahi Yuusuf Axmed Sabti, June 30, 2007(HOL): Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay shidada iska daayaan oo ay gartaan danahooda iyo Mustaqbalkooda, isagoo carrabka ku dhuftay in Dowladda Federaalka Soomaaliyeed uu waqtigeeda kooban yahay, isla markaana aysan meesha iska joogi doonin. “Dowladdani waqtigeeda waa kooban yahay, mana sii jireyso, sidaas darteed waxaan Shacabka ugu baaqayaa in ay Shidada iska daayaan oo ay Danahooda iyo Mustaqbalkooda gartaan” ayuu yiri Madaxweyne Yuusuf oo sheegay in haddii fowdada iyo shidada ay sii socoto aysan jiri doonin doorashooyin dhaca iyo Xisbiyo la sameeyo. “Haddii Dadka qaarkiis is-leeyahay Dowladda Federaalka shanta sano ka dhameeya, taasi ma dhaceyso, annaguna meesha ka tegi meyno iyadoo aan xal loo helin Soomaaliya”ayuu mar kale madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed oo u waramayay Idaacadda Horn Afrik ee Magaalada Muqdisho. Arrimaha Amni darrada ka jirta Magaalada Muqdisho ayuu ka hadlay, wuxuuna sheegay in ay amni darrada jirta ka dambeeyaan kooxo sida uu yiri magacyo kala duwan la baxay sida Muqaawamo iyo Ansaar, wuxuuna sheegay in ay Dowladda horay arrimaha Amniga wax uga qabtay, haatanna ay ka qaban doonto. Wuxuu ka hadlay Madaxweyne Yuusuf Shirka Dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee dhawaan Muqdisho lagu qaban doono, wuxuuna si cad u sheegay in shirkaasi uu yahay mid lagu heshiisiinayo Beelaha Soomaaliyeed ee colaadaha dhexmareen,”Siyaasiyiinta iyo Bulshada Rayidka Soomaaliyeed Shirkii Kenya ayay ku soo heshiiyeen, shirkanna waa mid loo qabanayo Beelaha Soomaaliyeed”ayuu yiri Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed. Madaxweynaha waxaa uu carrabka ku adkeeyay in ay shirkaasi ka qeybgeleyso cid kasta oo ay beesheeda soo dirsato, wuxuuse diiday in ay shirka ka qeybgeli karaan Dad uu sheegay in ay ku jiraan Liiska Argagixisada. Madaxweynaha waxaa uu laalay oo uu diiday in dalka Soomaaliya ay heystaan Ciidamada Itoobiya, wuxuuna carrabka ku dhuftay in Ciidamada Itoobiyaanka ah ee Soomaaliya jooga ay ku yimaadeen si sharci ah iyo rabitaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo uu sheegay in marka laga maarmo ay bixi doonaan. Dhanka kalena, Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya C/llaahi Yuusuf Axmed waxaa uu hambalyo u diray Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo, isagoo ugu hambalyeeyay munaasabadda 47 guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliya xornimadeeda ka qaadatay Gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga, wuxuuna u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed in ay munaasabaddan teeda kale ku gaaraan Nabad, Horumar iyo Baraare. Si kastaba arrintu ha ahaatee, Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan wuxuu cafis u fidiyay xubno ka tirsanaa Maxkamadihii Islaamka iyo kuwo ka soo horjeeday Dowladda Federaalka oo xabsiyo ugu jiray, iyadoo cafiskaasna ay si weyn u soo dhaweysay Beesha Caalamka oo ku tilmaantay tallaabo loo baahnaa.
Bandowgii saarnaa Baydhabo oo caawa la qafiifiyay
Maamulka gobolka Baay ayaa maanta shaaca ka qaaday in muddo saacado ah dib loo dhigay Bandowgii saarnaa magaalada Baydhabo munaasabadda 1da July oo ku beegan caawa saqda dhexe.Gudoomiyaha gobolka Baay, Max’uud Xuseen Barbaar oo shabelle u waramay ayaa sheegay in bandowgii saarnaa magaalada Baydhabo ay qaadeen ilaa 1da habeenimo, isagoo sheegay in bandowgaasi uu habeen dambe si caadi ah dib u bilaban doono.
Barbaar ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay amaan darrida ka jirta gobolka Baay oo ay ku soo kordheen qaraxyo lala eeganayo Hotelada ay dagan yihiin mudanayaasha Baarlamanka, isagoo sheegay in ay si deg deg ah wax uga qaban doonaan arinkaasi.
Qarixii ugu dambeeyay ayaa waxaa lala eegtay Hotel Teeseey oo ku yaala magaalada Baydhabo fariisina u ah mudanayaal ka tirsan Baarlamanka Somalia, iyadoo qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo rayid ah.
Bandowgii saarnaa Muqdisho oo la qafiifiyay, iyadoo la maqlay qaraxyo xoogan
Bandowgiii Saarnaa magaalada Muqdisho ayaa la qafiifiyay caawa munaasabadda 1da Lulio owgeed, iyadoo Qaraxyo xoogan ay gil gileen qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay.Afhayeenka dowladda KMG ah ee Somalia, Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa hadalkani ka sheegay xarunta Villa Somalia in la qaaday Badowgii saarna caasimadda caawa oo kaliya, laakiin habeen dambe uu sidiisa ku soo laabanayo.
Waxa uu sheegay in dowladda KMG ah ay u sameysay arinkaan munaasabadda 1da Lulio oo xaflad lagu weyneynayo ay ka soconeyso xarunta madaxtooyada.
Sidoo kale Bandowgii saarnaa magaalada Baydhabo ayaa iyana la qafiifiyay munaasabadda 1da Lulio owgeed.
Dhinaca kale Qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay caawa fiidkii wadada u dhaxeysa isgoysyada Bakaaraha iyo H/wadaag ee magaalada Muqdisho, iyadoo wali aan la ogeyn qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi.
Ilaa 2 qarax ayaa laga maqlay halkaasi, iyadoo sidoo kale la maqlay rasaas goos goos ah oo aan la ogeyn cidda is weydaarsatay.
Qof rayid ah oo lagu diley suuqa Bakaaraha ee M/Muqdisho
Hal qof ayaa geeriyodey mid kalena dhaawac ayaa soo gaarey ka dib markii kooxo hubeysan oo aan la garaneyn ay rasaas ku furen dad ka ag dhawaa agagaarka suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.Falkan oo ka dhacey abaare 2dii duhurnimo iyo 30 daqiiqo waddada isku xirta isgoysyada Howl wadaag iyo Baar Ubax ayaa waxaa nimankan oo ku hubeysnaa bastoolado ay ku tacshiiradeeyeen nin rayid ahaa oo xilligaasi maraayey waddadaasi.
Waxaana sidoo kale dhaawac ka soo gaarey rasaastii la furey qof kale oo goobta ka ag dhawaa, sida u sheegey wariye Shabelle ka tirsan oo goobtaasi tagey markii uu falka dhacey ka dib.
Kooxaha dilkaani geystey ayaa baxsadey iyadoo illaa iyo hadda aan la garaneyn kooxahaasi iyo sababta lagu diley qofkaasi rayid ka ahaa.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalmihii ugu dambeysey caadi ka noqotey dilalka micno darada ah iyo qaraxyada lala bartilmaameedsanaayo ciidamada dowladdaa iyo kuwa Ethiopia.
War Deg Deg ah: Israsaaseyn ka dhacday magaalada Baydhabo
3 ruux ayaa ku dhaawacmay israsaaseyn ka dhacday maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, xilli maalmihii la soo dhaafay amaanka magaaladaasi laga deyrinayay.Israsaaseyntaan oo u dhaxeysay ilaalada wasiirka maaliyadda dowladda KMG ah, Shaati Gaduud iyo ciidamada Militariga ah ayaa waxa ay timid ka dib markii ay isku dhaceen labo gaari oo mid ka mid ah uu ahaa Lancrusser ah iyo UD ay saarnaayeen ciidamada Militariga.
Mid ka mid ah dadka dhaawacmay tacshiiraddaan ayaa waxa uu ahaa ciidamada Militariga halka labada kalene ay ahaayeen dadkii shacabka ahaa ee halkaasi ku dhowaa, kuwaasi oo la dhigay Isbitalka magaalada Baydhabo.
Israsaaseyntaan oo socotey daqiiqado ayaa waxa ay ka dhacday gagaarka Bankiga magaalada Baydhabo, iyadoo goobta iska horimaadka uu ka dhacay ay isku gadaameen ciidamada maamulka gobolka Baay.
Xaaladda ayaa hatan dagan, iyadoo isku socodka dadka iyo gaadiidka uu dib u bilowday.
Barre Hiiraale oo idaacada VOA ka qirey in uu C/laahi yuusuf ka dambeeyey qaraxiisa
Juunyo 29, 2007
Wasiirkii hore Gaashaandhiga Barre Hiiraale ayaa maanta ka qirey idaacada VOA in uu qaraxii uu ku dhaawacmey uu ka dambeeyey Madaxweyne C/laahi yuusuf, wuxuuna intaa ku daray in C/laahi Yuusuf uu dabaal degey markii uu qaraxa igu dhacay beesha SADe iy Aniguba wuxuu rabaa in uu na baabi’iyo, midaasna waa la isku joogaa ayuu yiri Barre Hiiraale.
UNCHR OO TIRI 33,000 AYAA KA QAXAY MUDISHO BISHAN JUN/07
UNHCR, Xafiiskeeda ayaa ka soo baxay in bishan Jun/2007 ay Muqdisho ka qaxeen ilaa 33,000 qof oo ka cararay nabadgelyo la’aanta ka jirta Muqdisho.
UNHCR ayaa tiri Muqdisho ma aha meel la qadariyo bani’aadamka sidaa darteed bay uga carareen dad faro badan uga cararayaan Muqdisho.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Juunyo, 2007.